कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा असल नागरिकको कर्तव्य : के गर्दा हामी सुरक्षित हुन्छौं ?
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड १९ (कोरोना) भाइरसले हालसम्म ३ लाख ३८ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने साढे १४ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा भने हालसम्म एक जना मात्र संक्रमित भएको र ती व्यक्ति पनि निको भएर घर फर्किएको सरकारी तथ्यांक छ ।
करीब १ सय ८७ देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको स्थितिमा नेपाल अपवाद हुन सक्ला त ? कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नेपाल अपवाद हुन नसक्ने बताउँछन् ।
'आज, भोलि या पर्सि जहिले भएपनि नेपालमा कोरोना देखिन सक्छ र सरकार त्यही अनुसारको तयारीमा छ,' एक उच्च सरकारी अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर यस्तो अवस्थामा हामी त्रसित हुनु हुँदैन । विश्वका लगभग सबै देशहरूमा देखिएको कोरोनासँग लड्न नेपाल सरकार तयार भएर बसेको छ ।'
ती अधिकारीले भारतमा नदेखिँदासम्म आफूहरू ढुक्क रहेको सुनाए । 'भारतमा नदेखिने बेलासम्म हामी ढुक्क थियौं,' उनले भने, 'अहिले त्यो स्थिति रहेन । कुनै पनि बेला संक्रमण नेपालमा देखिन सक्छ । हामी त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौं ।'
केही दिनअघि सरकारले परीक्षण नै नगरी संक्रमण नभएको दाबी गरेर जनतालाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालमा कोभिड १९ भाइरस आइसकेको दाबी गरेका छन् । डा. दीक्षितले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालमा भाइरस आइसकेको तर त्यसले रोगको रूप लिन बाँकी रहेको मेरो अनुमान छ । भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि बाहिर देखिन केही दिन वा हप्ता पनि लगाउन सक्छ ।’
सरकारले कमजोरीसहित नै भएपनि कोरोनालाई रोकथाम गर्न भगिरथ प्रयत्न गरेको छ । संक्रमित देशबाट अथवा ती देशमा ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाइएको भएपनि शनिवार सिल्क एयरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न अनुमति दिइएको थियो । सरकारले यस्तो जोखिमयुक्त निर्णय किन लियो भन्ने जवाफ सरकारले नै देला ।
तर संक्रमित देश हुँदै नेपाल आएका करीब १ सय जना यात्रुहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने, नियमित परीक्षण गरिरहने र निगरानीमा राख्नुपर्ने कर्तव्यबाट भने सरकार च्यूत हुनु हुँदैन ।
सचेत नागरिकको भूमिका
यस्तो बेलामा सचेत नागरिकले देशमा फैलिएको आतंक कम गर्न केही भूमिका खेल्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनले सरकारले चालेको कदममाथि विश्वास गर्नुपर्ने र सरकारले दिएको आधिकारिक सूचना मात्रै पत्याउनुपर्ने बताए ।
'यतिबेला सचेत नागरिकले गर्न सक्ने एउटै कुरा छ, त्यो हो घरमै बस्ने,' डाक्टर पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'घरमा बुढाबुढी छन् भने तिनीहरूको केयर गर्नुपर्छ । अन्य बिरामी कोही छ भने त बिल्कुलै बाहिर निस्कनु हुँदैन ।'
डाक्टर पाण्डेले कोरोनाबारे सही र प्रमाणित सूचना मात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत दिने गर्नु नै असल नागरिकको कर्तव्य रहेको बताए ।
'अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित भएकामध्ये २ देखि ३ प्रतिशत मात्र मृत्युको मुखमा पुगेका छन्,' उनले भने, 'त्यो पनि बच्चाबच्ची र युवामा निकै कम देखिएको छ । त्यसैले आवश्यक जोहो गरेर घरमै बस्नु र रुघाखोकीसँग सम्बन्धित लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल जानु र अरूलाई जान सल्ल्लाह दिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण काम हो ।'
विशेष गरेर भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा त्यहाँका सचेत नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले मान्छेहरूको आवागमनलाई रोक्ने पहल गर्नुपर्ने र शंकास्पद क्षेत्रबाट आएकाको विशेष निगरानी गर्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ ।
बढ्दै परीक्षणको दायरा
परीक्षण नै नगरी सरकारले कोरोना छैन भनिरहेको आरोप लागिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको बताएका छन् । कोभिड १९ संक्रमणको सम्भावना देखिएका जो कोहीलाई पनि परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको उनले लोकान्तरलाई बताए ।